Narary ny tendako: inona no raisina | Bezzia
Marary ny tendako: inona no raisina
Bezzia | | Torohevitra momba ny fahasalamana, fahasalamana
Matetika amin'ny fahatongavan'ny hatsiaka no iaretantsika fahasosorana sy fanaintainana eo amin'ny tenda. Raha miaro ny tenantsika isika, na ho ela na ho haingana dia mety hiharan-javatra betsaka na kely noho io aretina mahazatra amin'ny vanim-potoana mangatsiaka io isika. Izany no maha-zava-dehibe ny fiomanana manasitrana tenda maharary.
Betsaka ny fomban-drazana sy ny fitsaboana ao an-trano hitsaboana ny tsy fahasalaman'ny tenda, na dia misy aza ny vokatra fanafody azo antoka izay manome antoka ny fanamaivanana ao anatin'ny fotoana fohy sy mandritra ny fotoana maharitra.
1 Fa maninona ny tendanao no marary?
1.1 Ho an'ny sery na gripa mahazatra
1.2 Amin'ny vava maina
1.3 Ho an'ireo mijaly amin'ny aretina rehetra
2 Ny fanafody tsara indrindra amin'ny tenda
3 Torohevitra hikarakarana ny tendanao
Fa maninona ny tendanao no marary?
ny ny antony lehibe ka ny tenda maharary atahorana dia toy izao manaraka izao.
Ho an'ny sery na gripa mahazatra
Ny ankamaroan'ny fotoana maharary tenda dia vokatry ny aretina viraliny toy ny gripa na sery mahazatra. Amin'ny ankapobeny, ireo dia olana madinidinika izay azo vahana amin'ny fihinanana zava-mahadomelina mety sy ny fihazonana ny vava ho mando.
Amin'ny vava maina
Amin'ny tontolo mihidy marobe, ny vava dia mazàna maina, mamokatra a fahasosorana amin'ny tenda izany dia mety hiteraka tsy fahazoana aina. Ny miaina amin'ny vava, na avy amin'ny fahazaran-dratsy na avy amin'ny vavorona voasakana, dia miteraka vava maina ihany koa.
Ho an'ireo mijaly amin'ny aretina rehetra
Aretina hafa toy ny kitrotro, pox pox, mononucleosis, sns., dia miteraka fahasosorana eo amin'ny tenda.
Na eo aza ny fisian'ny fanafody an-trano maro hanamaivanana ireo fanaintainana ireo dia tsara kokoa ny manatona fanampiana amin'ny mpamonjy voina. Misy karazana safidy hafa, toy ny pilina pilina mitsentsitra, izay isaina ny flurbiprofen 8,75 mg, manala ny tenda maharary amin'ny olon-dehibe sy ankizy mihoatra ny 12 taona. Ho fanampin'izany, manana toetra emollient sy fanampiana ho an'ny fivontosana sy ny fivontosan'ny tenda izy ireo, mampitony aorian'ny 2 minitra ary manome fanamaivanana mahomby hatramin'ny 4 ora. Tsy tokony hampiasaina raha misy fery gastroduodenal. Vakio ny lalana misy ireo fanafody ireo ary manatona ny mpivarotra fanafody. Strefen dia zava-mahadomelina avy amin'ny Reckitt Benckiser Healthcare SA
Ny fanafody tsara indrindra amin'ny tenda
Misy fomba fanao an-trano hanalana ny tenda maharary ankoatry ny fitsaboana fanafody.
Ny fitsaboana nentim-paharazana sasany hanamaivanana ny tenda dia toy izao manaraka izao.
gargle rano sira
Makà sotro tantely misy voasarimakirana
Misotro dite na fampidirana hafa
Mitroka amin'ny zavamaniry fanafody toy ny marshmallow
Marina fa ireo fanafody ao an-trano ireo dia afaka manamaivana kely ny tsy fahazoana mahazo tenda. Na izany aza, azonao atao ihany koa ny mampiasa vokatra fanafody manokana hampihenana ny fanaintainana ao anatin'ny fotoana fohy sy mandritra ny fotoana maharitra.
Torohevitra hikarakarana ny tendanao
Raha vantany vao lasa ny fahasosoran'ny tenda, ary rehefa nihena ny fanaintainana, dia mila mitandrina mba tsy ho sosotra indray.
Misotroa rano be. Ny hamandoana ao am-bava sy tenda dia hanakana azy tsy ho maina sy hahasosotra izay mety hiteraka tsy fahazoana aina (aza misotro rano mangatsiaka be na mafana be).
Miaina amin'ny oronao. Ny fahazarana miaina tsara, ny fisorohana ny fanaovana azy amin'ny vava, dia hisorohana ny rivotra tsy hanamaina ny vava sy ny tenda, hampihena ny vitan'ny fahasosorana.
Aza miresaka be loatra. Ny fanerena ny pharynx amin'ny fitenenana tafahoatra dia mety miteraka fivontosana na fahasosorana amin'ny pharynx izay miteraka tsy fahazoana aina.
Mialà sasatra ampy. Ny fanajana ny fotoana fialan-tsasatra natory sy ny torimaso dia ahafahan'ny vatana miala sasatra sy mameno ny tenany (ao anatin'izany ny tenda).
Arovy ny tenanao amin'ny sery. Arovy ny vava sy ny hatoka, amin'ny hafanana ambany sy ny drafitra, hisorohana ny fahasosorana amin'ny tenda, sery, sns.
Azontsika atao ny mitandrina mba hisorohana ny tenda maharary vokatry ny fahasosoran'ny tenda. Na izany aza, azo atao ny mandalo ny vanim-potoana mangatsiaka miaraka amin'ireo karazana fahasosorana ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Marary ny tendako: inona no raisina
Pull & Bear dia mitondra antsika ny akanjo fety fety tsara indrindra
Famantarana 4 fa tsy mandeha tsara ny zavamaniryo